Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Grenada Breaking News » Ratsy ve ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Grenada Breaking News • Interviews • fampiasam-bola • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fivarotana zom-pirenena Grenada
Amidy ny pasipaoro sy ny zom-pirenena. Ny lisitr'ireo firenena mivarotra pasipaoro mora vidy na tsia dia mety hanokatra ity tontolo ity noho ny heloka bevava amin'ny fampiasam-bola sy maro hafa.
Ho an'ny firenena kely iray miankina tanteraka amin'ny fizahan-tany, ny nosy Karaiba any Grenada dia misarika ny saina tsy ilaina amin'ny fomba nanodian'ny governemantany ny iray amin'ireo tetik'asa fandraisam-bahiny nampanantenaina indrindra tao anatin'ny taona maro.
Nijanona i Kimpton Kawana Bay, trano fandraisam-bahiny / toeram-ponenana lafo vidy izay novatsiam-bola tamin'ny alàlan'ny fandaharan'olom-pirenena miavaka momba ny Citizenship by Investment.
Ny mpamatsy vola voalohany dia Warren Newfield, izay hatramin'ny volana Mey 2021 dia masoivoho grenadianina lehibe ary iray amin'ireo konsily jeneraly telo ao Etazonia.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia programa misy ary avoakan'ny firenena maro any Karaiba, eny fa na dia any amin'ny firenena toa an'i Malta, any Sipra aza.
Ny valisoa ho an'ny olom-pirenena vaovao dia goavana ary mihosin-keloka mihitsy aza mba hahazoana fidirana any Etazonia.
Niova hevitra ve i Grenada ary mety hampidi-bola amin'ny fampiasam-bola lehibe?
Rehefa mihamafy ny sisin-tany sy ny lalan'ny fifindra-monina ny firenena maro, indostria vaovao no miasa mba hialana amin'ireo fetra ireo - amin'ny sarany mavesatra. Ilay indostria dia antsoina hoe Citizenship by Investments.